Dhimma Qorannaa Tarkaanfii Humnaa Loltoota Sudaan
Caamsaa 12, 2021
Sudaan keessatti deemookraasii deggeruun baatii Waxabajjii bara 2019 Namoota hiriiran irratti tarkaanfii fudhatameef Qorattonn biyyatti dhiyeenya kana qondaaltoota waraanaa sadarkaa olaanaa kanneen kaawunsilii biyyatti bulachaa jiru irratti gaaffii kaasaa jiru.
Kanneen qoratamaa jiran keessaa gogganaa kaawunsilii biyyatti bulchaa jiruu Jeneraal Abdulfattah Al-Burhan fi falmisiisoo kan ta’an garee humnootii deggersa hatattamaaf hogganaa kan ta’an Hamdan Dagalo keessatti argamu.Gareen kun uummata hiriiree haala hokkaraan guutameen facaasuuf namoota 120 caalaa galaafachuun komatamaa ture.
Koreen qorannoo kan addaa baatoo Onkolooleessa bara 2019 hundeeffamee namoonni kuma 3 caalaan waan beekan koree kanaaf raga ba’anii jiru.Hogganaan Koree kanaa Nabeel Adeeb Televiziyoona biyyatti irratti gaaffii fi deebii gaggeessaniin Jeneeraaloota waraanaa irratti qorannaan gaggeffamaa akka jiru mirkaneessan.
Nama barbaachiisaa dha ykn odeeffannoo qaba jennee yaadnee mara waamnee gaafanna.Kanas namnii mormee hin jiru. Akka hin dhiyaanneefis kan dhorkamee tokko iyyu hin jiru jedhan Adeeb.
Waxabajjii 3 bara 2019 Kaartuum keessatti humnootiin nageenyaa ummata Deemookraasii deggeruun hiriiran kannen kuma hedduu ta’an addaan bittineesuuf jecha tarkaanfii fudhachuun isaanii ni yaadatama.
Hiriirtoota addaan facaasuuf karoora kan baasee Jeneeraaloota jechuun kan yeroo sana biyyatti bulchaa ture human waraanaaf angawaan dubbii himaa turan Televiziyoona biyyatti irratti ibsanii turan.
Waa'ee Guutinsa Laga Abbayaarratti Wal-dhibdee Jiru Karaa Dippiloomaasii Furachuun Fedha: Masrii
Biyyoota Afrikaa Hedduu fi Yemen Keessatti Uummatni Miliyoona 34 Caalu Afaan Beelaatii Deebifamuu Qaba, Jedha WFPn